के तपाईलाई थाहा छ ग्रीन टी को यी ७ नोक्सान ? जानी राखौँ – Etajakhabar
के तपाईलाई थाहा छ ग्रीन टी को यी ७ नोक्सान ? जानी राखौँ
ताजा खबर :- तपाईले ग्रीन टी को फाइदाहरूको बारेमा थुप्रै जानकारी राख्नु भएकै होला र दिनहुँ यसको सेवन गर्दै आउनु भएको पनि होला । हरेक चीजको फाइदा र बेफाइदा दुवै रहेको हुन्छ तर आज तपाई ग्रीन टी को प्रयोगले पनि नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर अचम्म पर्न सक्नुहुन्छ । हो, ग्रीन टी पिउनुको नोक्सान पनि छ । जुन तपाईको स्वास्थ्यको लागि निकै खतरनाक सावित हुनसक्छ । यदि तपाईलाई अझै सम्म यसको बेफाइदाको जानकारी छैन भने ग्रीन टी को यी ७ नोक्सान अवश्य ध्यान राख्नुहोस् ।
१- ग्रीन टी मा पनि कैफिन हुन्छ । हुनत: कैफिनको मात्रा कफीको तुलनामा निकै कम हुन्छ तरपनि दिनभरिमा ग्रीन टी को अत्यधिक सेवन गर्दा यसले खतरनाक रोगहरू उत्पन्न गर्न सक्छ । यसले तपाई पेटको समस्या, अनिन्द्रा, उल्टी, पखाला एवम् अन्य स्वास्थ्य समस्याको शिकार हुन सक्नुहुन्छ ।
२- गर्भावस्था वा शिशुको जन्म पश्चात् ग्रीनको टी को अत्यधिक सेवन स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउँछ । यसको अधिक सेवनले गर्भपातको सम्भावना बढ्न सक्छ । दिनमा दुई कप भन्दा धेरै ग्रीन टी पिउनु गर्भवती महिलाको लागि विभिन्न किसिमले खतरनाक हुनसक्छ ।
३- तपाईलाई यो विश्वास नलाग्न सक्छ तर ग्रीन टी को अधीक सेवनले तपाईको शरीरमा आयरनको कमी हुनसक्छ । विशेषगरी ग्रीन टी मा पाईने टैनिनले खाद्य पदार्थ र पोषक तत्वबाट पाईने आयरनको अवशोषणमा अवरोध उत्पन्न गर्छ ।
४- ग्रीन टी अधिक मात्रामा पिउँदा क्याल्शियमको त्यो मात्रा बढ्छ, जुन यूरिनको माध्यमले शरीर बाहिर निस्कन्छ । यसबाट शरीरमा क्याल्शियमको अधिक कमी हुनसक्छ, जुन ओस्टियोपोरोसिस जस्ता रोगको कारण बन्न सक्छ ।
५- ब्राजीलमा गरिएको एक शोधका अनुसार, अधिक मात्रामा ग्रीन टी को सेवनले शरीरमा टेस्टोस्टेरोनको स्तर कम गर्छ । यस सोधमा यो कुरा पत्ता लागेको छ कि ग्रीन टी को सेवन कम गर्दा वा यसको मात्रामा कमी आउँदा टेस्टोस्टेरोनको स्तर सामान्य राख्न मद्दत मिल्छ ।
६- ग्रीन टी को अधिक सेवन गर्दा तपाईको भोकलाई कम गर्न सक्छ, जसले गर्दा तपाई उचित आहार सेवन गर्नबाट बञ्चित हुनुपर्दछ र शरीरलाई आवश्यक मात्रामा पोषण तत्व प्राप्त हुँदैन । यसकारण तपाईको शरीर कमजोर हुनसक्छ ।
७- ग्रीन टी मा पाईने ओक्जेलिक एसिड किड्नीमा पत्थरी बन्ने कारण हुनसक्छ । यसको साथै यसमा क्याल्शियम, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड र फस्फेट पनि पाईन्छ । जुन ओक्जेलिक एसिडको साथ मिलेर किड्नीमा पत्थरीको लागि जिम्मेवार हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन ११, २०७४ समय: १:५६:०४